Godka hoostiisa ayuu maalmo kula qaatay carruurta si uu caafimaadkooda uga warhayo - Worldnews.com
Waxa uu ka yimid dalka Australia, wuxuuna dalxiis u tagay dalka Thailand, balse markii ay soo ifbaxday masiibadii carruurta 12-ka ah ee godka hoostiisa ku go'doomay ayuu go'aansaday in uu ka qeyb qaato gurmadka.
Inta uu xirtay qalabka biyaha lagu quuso, ayuu godka salkiisa ugu tagay carruurta, halkaas oo uu
Nin New Zealand u dhashay balse asal ahaan ka soo jeeda Aasiya ayay dhibaato qabsatay ka dib markii qalabkii baasaboorka samaynayay uu aqbali waayay sawirkiisa sababtuna ay...
Dhibka qaraxii Muqdisho oo kordhay
Qeyba badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaanan ilaa iyo xalay laga seexan oo waxaa soconayay gurmadka loo samaynayay dadkii ku dhaawacmay weerrarkii xoogga badnaa ee...
Qeyba badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaanan ilaa iyo xalay laga seexan oo waxaa soconayay gurmadka loo samaynayay dadkii ku dhaawacmay weerrarkii xoogga badnaa ee magaaladaasi shalay gilgilay. Isbitaallada magaaladuna waxa ay weli la tacaalayaan dhiibaatada ballaaran ee ka dhalatay qaraxaasi, iyadoo aaggii uu ka dhacay qaraxa oo aheyd goob mashquul badan burburka...
Farxad iyo raynrayn ayaa lagu soo dhaweeyay soo badbaadinta 12ka wiil iyo tababarahooda kubbadda oo ku xannibnaa bohosha ay biyuhu ugu galeen ee waqooyiga Thailand, ka dib markii dadka biyaha quusa ay soo dhamaystireen hawshii ay dibadda ugu soo saarayeen. Shantii u dambaysay ayaa la soo saaray Talaadadii ka dib markii ay halkaas ku xayirnaayeen 17 maalmood. Hawlgalkii aan...
Isbitaal dhulka hoostiisa ku yaala oo Suuriya lagu duqeeyay
Isbitaal ku yaala Suuriya oo dhulka hoostiisa laga dhisay si looga badbaado duqeymaha cirka ayaa la duqeeyay. Waxa uu isbitaalkan ka shaqeeyaa gobolka Xama, waxaana laga dhisay 20 mitir dhulka hoostiisa, meel buur ah. Balse waxaa gilgiley weerar xaga cirka ah, waxaana ka dhashay burbur, balse ma jirto cid wax ku noqotay. Duqeyn loo geystay isbitaal ku yaalla Xalab Trump oo...
​MUQDISHU: Qarax ka dhacay nawaaxiga Xabsiga Godka Jilacow
MUQDISHU, Somalia- Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay nawaaxiga Xabsiga weyn ee loo yaqaan Godka Jilacow kaasoo lagu xiro maxaabiista dambiyada adag loo haysto. Qarax ayaa ka dhashay baabuur walxaha qarxa laga buuxiyay kaasoo la dhigay meherad lagu magacaabo blue sky oo ka agdhow Jeelka. Khasaaro kala duwan ayaa la sheegaya in weerarkaasi ka dhashay. Afhayeenka ggobolka...